त्रुटि: 53: सबैलाई तपाईले यस घातक त्रुटि बारे जान्नु पर्ने हुन्छ आईफोन समाचार
त्रुटि: 53: सबैले तपाईलाई यस घातक त्रुटि बारे जान्नु आवश्यक पर्दछ
एक प्रमुख कम्पनीको रूपमा, एप्पल विवादबाट विवादमा जाँदै छ। अन्तिममा ऊ गएको हो भन्ने नाम छ: त्रुटि 53। यो विवादले दाँत र नेलको रक्षा गर्ने र कम्तिमा पनि स्क्रिनमा उल्लेखित त्रुटिसहित आईफोन, आईपड टच वा आईप्याड ल्याउँदा एप्पलले समाधान दिने सोच्दछन् भन्ने बिचको विवादले एउटा सानो बहस उत्पन्न गरेको छ। यस पोष्टमा हामी यो असफलताको बारेमा अझ बढी वर्णन गर्ने प्रयास गर्नेछौं, जुन प्रयोगकर्ताहरूका लागि ठूलो समस्या हो जुन उनीहरूको उपकरणमा यसलाई हेरिरहेका छन्।
1 त्रुटि 53 XNUMX के हो?
2 कुन उपकरणहरू प्रभावित छन्?
3 त्रुटि 53 XNUMX किन देखिन्छ?
4 के त्रुटि 53 XNUMX मात्र टच आईडीको साथ अनियमितताको कारण देखा पर्दछ?
5 के भइरहेको छ?
6 कतिवटा उपकरणहरू अहिलेसम्म प्रभावित भएका छन्?
7 म कसरी 53 XNUMX त्रुटिबाट बच्न सक्छु?
8 त्रुटि 53 XNUMX को समाधान छ?
9 के एप्पलले बिभिन्न किसिमले व्यवहार गर्नुपर्छ?
त्रुटि 53 XNUMX के हो?
त्रुटि 53 एक कोड हो जुन आईट्यून्समा देखा पर्दछ जब आईफोनलाई पुनःस्थापन वा अपडेट गर्ने प्रयास गर्दै, र त्यो सिद्धान्तमा समाधान गर्न सकिदैन। त्रुटि देखा पर्नेछ जब उपकरण ए टच आईडी योसँग छेडछाड गरिएको हुन सक्दछ र यस उपकरणलाई सुन्दर, महँगो पेपरवेट जस्तो देखिन्छ।
कुन उपकरणहरू प्रभावित छन्?
जो मानिस यो समस्या देख्दैछन् उनीहरुको सब भन्दा मालिक को हो आईफोन or वा आईफोन Plus प्लस। आईफोन s एस र आईफोन s एस प्लस पनि प्रभावित हुन सक्छ, तर टच आईडी डिजाइन फरक छ। थप रूपमा, सेप्टेम्बर २०१ in मा बिक्रीमा गइसकेपछि, भर्खरको आईफोन मोडलहरू बजारमा केवल months महिना मात्र छन्, त्यसैले टच आईडीसँग समस्या भएका धेरै प्रयोगकर्ताहरूले ग्यारेन्टी प्रयोग गर्नेछन्। टच आईडी सहितको आईप्याड पनि प्रभावित हुन सक्छ।
टच आईडी भएता पनि आईफोन despite एसमा यस समस्या भएको देखिदैन।
त्रुटि 53 XNUMX किन देखिन्छ?
यहींबाट विवाद सुरु हुन्छ। एप्पलले त्रुटि Appears 53 देखा पर्दछ हाम्रो डाटा र गोपनीयता लाई सुरक्षित गर्न। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यदि कुनै उपकरणले नयाँ हार्डवेयर र यो डिफल्टद्वारा समावेश गरिएको एक बीच मिल्दैन भने फेला पार्छ, यो उपकरणले एकतर्फी आफैलाई लक गर्ने निर्णय गर्दछ। यस तरिकाले, यो पहुँच गर्न सक्षम नहुनाले, तपाईं हाम्रो सबै डाटा र गोपनीयता सुरक्षा हुनेछ।
के त्रुटि 53 XNUMX मात्र टच आईडीको साथ अनियमितताको कारण देखा पर्दछ?
सं अन्य हार्डवेयरबाट देखा पर्न सक्छ। त्यहाँ केसहरू छन् जहाँ अनधिकृत स्थापनामा स्क्रिन मर्मत गर्दा त्रुटि has has देखा पर्‍यो। एक विशेषज्ञ मेकानिक जसले अज्ञात रहन चाहन्थे भन्छन कि एप्पलले भनेको कुरा केवल टच आईडीसँग सम्बन्धित छ "बुलशिट"।
कोही पक्का छैन जस्तो देखिन्छ। सम्भवतः एप्पललाई त्रुटि Error को साथ वास्तवमै के हुन्छ भनेर थाहा छ, तर त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरू बिभिन्न भिन्न थियरीहरू छन्।
एप्पल चाहान्छ हामी तपाईंको प्रतिष्ठानमा उपकरणहरू मर्मत गर्नेछौं। यो अधिक प्रभावित प्रयोगकर्ताहरु द्वारा आयोजित सिद्धान्त हो। एप्पल कम्पनीले यो कहिल्यै स्वीकार गर्दैन, किनकि यो एकाधिकार अभ्यास हुनेछ र मुद्दा चलाइनेछ, वास्तवमा यो पहिले नै भइसक्यो। यस तरिकाले, एप्पलले आफ्नो जेब मर्मतका साथ भर्नेछ। यस सिद्धान्तको साथ समस्या यो हो कि उनीहरूले त्रुटिहरू with 53 को साथ यन्त्रहरू मर्मत गरिरहेका छैनन्। यदि यो वास्तवमै बढी पैसा कमाउन गरिएको थियो भने, यो अनौपचारिक स्थापनामा मर्मत गरिएका उपकरणहरू रोक्न र तिनीहरूलाई मर्मत गर्नु राम्रो हुँदैन र? यदि हामी गलत सोच्न चाहन्छौं भने, तिनीहरूलाई रोक्दा पनि प्रभावित ग्राहकलाई नयाँ आईफोन किन्न बाध्य पार्छ, तर मलाई लाग्छ कि उनीहरूको आईफोनमा त्रुटि seesaदेख्ने प्रयोगकर्ताले अर्को आईफोन किन्न विचार गरेन, यदि यसलाई लात लिएन र कुनै अन्य खरीद गरेन भने। फोन र प्रतिस्पर्धा।
यो गल्ती हो। त्रुटि is 53 को मूल्य हो, रिडन्डन्सी, एक त्रुटि, एक विफलता, केहि नदेखिन, वा कम्तिमा त्यो जस्तो होइन। यो एक सुरक्षा मापन हो जुन गलत हुँदैछ, जुन हातबाट बाहिर गयो।
कतिवटा उपकरणहरू अहिलेसम्म प्रभावित भएका छन्?
Es सही संख्या थाहा छैन, तर iFixit समर्थन पृष्ठ विषय, जुन सेप्टेम्बर १,, २०१ 19 मा प्रकाशित भएको थियो, पहिले नै २००,००० भन्दा बढी भ्रमणहरू प्राप्त गरिसक्यो। यसको मतलब यो होइन, यसको टाढाबाट, जुन तपाईंको पृष्ठ भ्रमण गरेका सबैले त्यसो गर्छन् किन कि तिनीहरू प्रभावित भएका छन्, तर कम्तिमा यसले तपाईको चिन्तालाई दर्शाउँछ।
म कसरी 53 XNUMX त्रुटिबाट बच्न सक्छु?
हामीले पहिले नै यसको दिनमा यसबारे छलफल गरेका थियौं: उत्तम, जब पनि सम्भव हुन्छ, हुन्छ मर्मत उपकरणहरू एक आधिकारिक स्थापना हो। तर त्यहाँ दुई समस्याहरू छन्:
मूल्य। एप्पलले तपाइँका उपकरणहरू पूर्ण रूपमा मर्मत गर्न सक्दछ (वा नयाँ समाधान प्रस्ताव गर्दछ), तर धेरै मूल्यमा।
सबै देशहरूको आधिकारिक स्थापनामा पहुँच छैन वा अधिकृत। समर्थन बिना देशहरूका लागि, तपाइँ यसलाई कसरी सच्याउनुहुन्छ? एप्पलले हामीलाई उनीहरूलाई सम्पर्क गर्न आमन्त्रित गर्दछ, त्यसैले कुनै पनि समस्या भएमा हामी देशको वेबसाइटमा जानुपर्दछ र एप्पललाई जुनसुकै तरिकामा सम्पर्क गर्नुपर्दछ, या त कलको साथ, च्याट वा ईमेलबाट।
त्रुटि 53 XNUMX को समाधान छ?
पक्का, तर यो सरल छैन। के प्रमाणित गर्न सकिन्छ सक्कली टच आईडीलाई पुन: भेला गर्नुहोस् र अन्य कुनै पनि अंशहरू परिवर्तन गरिएको थियो।
के एप्पलले बिभिन्न किसिमले व्यवहार गर्नुपर्छ?
हो। एक शUB्का बिना। म बुझ्दछु कि टिम कुकले चलाउने कम्पनीले हाम्रो गोपनीयताको ख्याल राख्छ। त्यो स्वीकार्य छ। यो एक बिन्दु हो जसका लागि हामी मध्ये केहीले तिनीहरूका यन्त्रहरू खरीद गर्दछौं। तर हामीले i को बारेमा केहि बुँदाहरू राख्नु पर्छ:
किन (shit ...) उनीहरूले कुनै प्रकारले स्पष्ट चेतावनी दिदैनन्? एप्पलले यो केहि हुनु भन्दा पहिले केहि रिलिज गर्नु पर्छ। यदि समस्या सेप्टेम्बर २०१ appear मा देखा पर्न शुरू भयो, आईफोन sell बेच्न अघि मैले चेतावनी दिनु पर्छ कि टर्मिनल को भागहरु लाई एक "खतरनाक" त्रुटि हुन सक्छ, यसलाई कल गर्न को लागी।
किन टर्मिनलहरू ठीक गरेन जसले त्रुटि निम्त्याउँछ? हामी गोपनीयतामा फर्कन्छौं: म बुझ्छु कि तिनीहरू हाम्रो डाटा सुरक्षित राख्न चाहन्छन्, तर के हुन्छ यदि म गएँ, सोध्नुहोस्, एक प्रकारको जिम्मेवारी कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुहोस् र तिनीहरूले यो मेरो लागि अनलक गरे? घटनामा त्यहाँ डाटा चोरी घोटाला केहि प्रकार थियो, एप्पल कागजात बाहिर खींच्न र यो ग्राहकको गल्ती प्रमाणित गर्न सक्दछ।
जसले मलाई सोच्न लगाउँछ कि त्रुटि 53 XNUMX "केहि" हो जुन कपर्टिनो कम्पनीको हातबाट बाहिर आएको छ। तिनीहरूले केहि गर्नुपर्दछ र तिनीहरूले अहिले गर्नु पर्छ। अवश्य पनि, सुरक्षाको स्तर कायम राख्दै। तिम्रो के बिचार छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » त्रुटि: 53: सबैले तपाईलाई यस घातक त्रुटि बारे जान्नु आवश्यक पर्दछ
नोर्बर्ट एडम्स भन्यो
मलाई लाग्छ यो चाखलाग्दो हुनेछ यदि तपाईंले यो लिंकलाई हेर्नुभयो भने
यसले मलाई यस्तो प्रभाव दिन्छ कि टच आईडीको लागि सजिलो छ, केबल जसले यसलाई फिड गर्दछ वा यससँग सम्बन्धित केही बिग्रन्छ जब यसलाई विघटन गर्दा (व्यक्तिगत रूपमा मैले यसलाई ss मा गर्नुपर्‍यो र यो केही हदसम्म भारी छ) एप्पलको लागि भन्दा। यस प्रकारको अवरोध राख्न आफैलाई समर्पित गर्न, जुन तपाईं भन्नुहुन्छ, तपाईंलाई के गर्न मनपर्दछ कि यसलाई लात बनाउनु हो र जीवनमा आईफोन किन्नको छैन।
Norbert Addams लाई जवाफ दिनुहोस्
ह्युगो एडुआर्डो भन्यो
म technical बर्ष आईफोन मर्मत गर्ने टेक्निकल सेवामा काम गर्छु, र मेरो अनुभव त्रुटि553, बाहिर आउँछ किनभने तर्क फलकमा फ्लेक्सबाट बटन हटाउँदा तिनीहरू यसलाई नराम्ररी हटाउँछन् र क्षति पुर्‍याउँछन् वा काट्छन्, यदि तिनीहरू यसलाई विच्छेद गरियो किनकी यो हुनुपर्दछ कि उनीहरूले यसको क्षति गर्दैनन् र उनीहरूलाई आईफोन पुन: भण्डार गर्न कुनै समस्या हुँदैन
Hugo Eduardo लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग तीन आईफोन s एस छ तर यदि त्यो मलाई भयो भने, म सोच्दछु कि म फेरि कहिले पनि आईफोन खरीद गर्ने छैन
Humberto लाई जवाफ दिनुहोस्
दुई चीजहरू हेर्नका लागि
१ त्रुटि को के 1 53 बाहिर आउँदछ जब घर परिवर्तन गर्दा र घरको लागि मात्रै किनकि हामी सबैलाई थाहा छ घरमा एकीकृत टच आईडी छ र त्यो टुक्रा केवल एप्पलले प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ किनभने हाम्रो फिंगरप्रिन्टहरू यसमा भण्डार गरिएको छ र यसलाई अपडेट गर्दा। सत्यापित गर्नुहोस् कि बटन बटन मूल हो र यो परिवर्तन भएको छैन किनकि यो त्यस्तो थिएन भने, कल्पना गर्नुहोस् कि हाम्रो फोन चोरी भएको छ र अनलकिंग फिंगरप्रिन्ट द्वारा छ, तिनीहरू अर्कोलाई बटन परिवर्तन गर्छन् र ह्वाश गर्दछन्। तर म घर पुन: परिवर्तन गर्दा त्रुटि फेरि दोहोर्याउँदछ, यदि मात्र स्क्रिन परिवर्तन गरिएको छ र उही घर प्रयोग भएको छ भने, केहि पनि हुँदैन, म यो भन्छु किनभने म आईफोन and र plus प्लसका साथीहरू अनधिकृत सिटमा परिवर्तन भएको देख्दा थकित छु र ० समस्याहरू र तिनीहरूले पहिले नै एक हजार पटक अपडेट र पुन: भण्डार गरेका छन् र केहि पनि छैन र मसँग पनि6छ जुन मैले पछिल्लो बीटा स्थापित र ० समस्याहरूको साथ बदलिएको स्क्रिनको साथ प्रयोग गरी खरीद गरेको हो।
२. यदि तपाईं यस्तो मूल्यको फोन किन्नुहुन्छ र यो पनि वारेन्टीमा छ भने, तिनीहरूले भाँडो गरेमा यसमा मूल भागहरू राख्नुपर्दछ र त्यो केवल एप्पलमा गर्न सकिन्छ किनकि उनीहरूले सबै मूल भागहरू नियन्त्रण गर्छन् र बिक्री अनुमति दिँदैनन्। तिनीहरू मध्येको तिनीहरूको डोमेन बाहिर र यदि तिनीहरूले तपाईंलाई भने अन्यथा तिनीहरू तपाईंसँग झूट बोल्दछन्, साथै आईफोन Apple को एप्पलमा स्क्रिन परिवर्तन गर्नुको साथै € १०० को लागत आउँछ र यसको लागत बढी वा कम नै हुन्छ र यद्यपि यसको लागत एप्पलमा बढी हुन्छ। यस्तो क्वालिटीको मोबाइलमा केही समुद्री डाकू राख्नको लागि दया र समान लागत वा समान समान लागत।
Crisrope लाई जवाफ दिनुहोस्
हेर्नुहोस् कि मलाई आईफोनहरू मनपर्दछ र म उनीहरूसँग बर्षसम्म रहन्छु, तर यो एकाधिकारले मलाई थकाउदैछ, धेरै धेरै छानिएका चीजहरूको साथ उनीहरूको। अन्तमा उनीहरूले के प्राप्त गर्ने छन् कि उनीहरूले प्रतियोगितामा स्विच गरे जस्तै तपाईले यहाँ भन्नु भएको छ।
Esten लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले भनेको कुरा मैले ठीकै भनेको छु। म धेरैसँग सहमत हुन सक्दिन।
ठीक छ, सत्य यो हो कि एप्पल कहिलेकाँही धेरै दु: खी हुन्छ, किनकि म तिनीहरूलाई एक महिनाको लागि कल गर्दै थिएँ र स्क्रिन परिवर्तन गर्न बजेटको लागि कुर्दै छु र मसँग अझै प्रतिक्रिया छैन, र मैले अनौपचारिक साइटको लागि रोजेको छु, सत्य यो हो कि उनीहरू कहिलेकाँही तिनीहरूको सेवा यति डरलाग्दो हुन्छ कि तपाईंसँग अरू कुनै विकल्प छैन।
ZoltXs लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन S एस छ र जब म यसलाई ब्याटअप गर्न आईट्यून्ससँग सिnch्क्रोनाइज गर्न चाहन्छु तब मैले यो त्रुटि पाउँछु र म सिron्क्रोनाइजेसन पूर्ण गर्न सक्दिन, यो पूर्ण गर्नु अघि यो स्थिर हुन्छ। मलाई थाहा छ कि यो आईफोन मर्मत गरिएको छैन वा यसका आन्तरिक सामानहरू हेरफेर गर्न खोलेको छैन। कुनै समाधान?
Giancarlo लाई जवाफ दिनुहोस्
के iOS .9.3 ..XNUMX ले आईफोनको प्रदर्शन सुधार गर्दछ? उत्तर हो हो
एप्पलले विकासकर्ताहरूलाई नयाँ प्रमाणपत्र स्थापना गर्न सल्लाह दिन्छ